Marketing Assistant | Job in Myanmar ﻿
23.8.2019, Full time , Distribution / Logistic
•	Event, Seminars, Campaignစသည့်ပွဲအစီအစဉ်များအားကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။
•	Marketing Certificateရရှိသူဖြစ်ရမည်။
Work location အမှတ်(၃၅၃)၊ရှိုင်းကွန်ဒို၊ပထမထပ်၊သိမ်ဖြူလမ်းပေါ်၊SL Show Room အပေါ်ထပ်၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အရှေ့ဒဂုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	Data entry for inbound and outbound daily warehouse operation by systems for all stock transactions i.e. receiving, put-away, picking, dispatch, cycle count, stock checks, stock takes and stock return. •	Responsible for the inventory balance of software, store ledger and physical ground stock. •	Ensure all procedures and instructions are properly documented, understood, and apply. •	Support the warehouse operation team to correct and prevent any issues in warehouse process. •	Organize files both manually and system.
•	Accurate checking and recording of all Inbound and Outbound Products information in daily operation. •	Understand warehouse/transport specification in order to ensure product handling in the most appropriate way. •	Ensure all procedures/Work instructions are properly documented, understood, and apply. •	Check and confirm stock return, damage in daily operation. •	General Housekeeping to maintain safe and clean working environment according to 5S standard. •	Delivering exact quantity on time based on requirements. •	Support ...
•	Final Report နှင့် အခြား လိုအပ်သော Report များကို အချိန်မှီ ရေးဆွဲ တင်ပြ နိုင်ရမည် ၊ •	စာရင်း Format များကို စနစ် တစ်ကျ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်၊ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ...
• လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အရှေ့ဒဂုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	Supervises inbound, outbound and deliveries to ensure stock accuracy and to minimize stock damages •	Receiving goods in terms of arranging storing space, getting delivery note and updating data on Microsoft Excel and ERP system. •	Ensuring materials & tools to be in good condition for using, receiving good quality materials/products. •	Supervising Loading team with safety and efficiency as priority and to improve of KPI. •	Ensure all procedures/Work instructions are properly documented, understood, and apply. •	Maintain g ...
•	Maintain accuracy of data entry for all Warehouse Management and Information systems for all stock transactions i.e. receiving, put-away, picking, dispatch, cycle count, damage, stock checks, stock takes and stock return. •	Investigation and resolution of stock discrepancies, operation process discrepancy and reduce prevalence of damages/defective stock. •	Accuracy and timeliness of the following recording data and report: Cycle count weekly report, Root cause of cycle count discrepancy weekly report, Damage tyres weekly report, solut ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Clients များထံသို့ကုန်ပစ္စည်းများအား အချိန်နဲ့တပြေးညီ တိကျမှန်ကန်စွာ ရောက်ရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ •	Stock လက်ကျန် စာရင်းနဲ့ Damage စာရင်းများအား မှန်ကန်စွာ စစ်ဆေးရမည်။ •	Warehouse Reporting များအား သက်ဆိုင� ...
152 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	Logisticsလုပ်ငန်းပိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	Event, Seminars, Campaignစသည့်ပွဲအစီအစဉ်များအားကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။
•	Logisticsလုပ်ငန်းပိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	Event, Seminars, Campaignစသည့်ပွဲအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	ပစ္စည်းအ၀င်ကားများအတွက်ပစ္စည်းချရန်နေရာကြိုတင်စီစဉ်ပေးရမည်။ •	အပျက်အစီးများ၊အရေအတွက်များ(အပိုအလို)များရှိခဲ့ပါကသက်ဆိုင်ရာ (WH Manager, DC Supervisor) အားအချိန်မှီအကြောင်းကြားပေးရမည်။ •	ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုံ၊လ� ...
Admin Assistant M (3)
152 Days, Full time , 200 - 300 , Distribution / Logistic
မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ ရုံးပိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ အစိုးရရုံးများသို့ ဝင်ထွက် သွားလာနိုင်သူဖြစ်� ...
Marketing Assistant Marketing & PR Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Super light Trading & Logistics Services Marketing & PR jobs Marketing & PR jobs Distribution / Logistic Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(9938)
Work in Yangon Region(2089)
Work in Mandalay Region(765)
Work in Naypyitaw City(124)
Dagon Glory Co., Ltd.(788)